Published by Mahesh Pathak on 3rd February 2022 3rd February 2022
सहज उत्तर हुन्छ, नेपालको अर्थतन्त्र संकटमा पर्छ।
देशको अर्थतन्त्र संकटमा परे नेतालाई पर्ने त हो, म विदेशमा काम गरेर नेपालमा परिवार पाल्नेलाई के मतलब? यदी यही सोच्नु भएको छ भने निक्कै गलत सोच्नु भएको छ। यदी अर्थतन्त्र संकटमा पुग्यो भने सबै भन्दा धेरै दुख नेपालमा रहेका तपाई-हाम्रा आफन्तले नै पाउनेछन्।
श्रीलंकाको हालैको अवस्थाबाट बुझौं है त।
श्रीलंकामा अहिले अत्याधिक मूल्य वृद्धी भएको छ। खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य दोब्बर बढेको छ। खाद्य पदार्थको मूल्य वृद्धिले अहिलेसम्म कै सबै रेकर्ड तोड्यो र २१.१% पुग्यो। अत्याधिक मूल्यवृद्धिको कारण श्रीलंकाका मजदुरहरूको परिवारले २ छाक खाना पनि मुस्किलले व्यवस्था गर्नु पर्ने स्थिति बनेको छ। अन्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले पनि सबै रेकर्ड तोडेको छ।
श्रीलंकाका किसानले मल तथा विषादीको अभाव भएपछी आन्दोलन गरे र सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्यो। तर पनि बजारमा मल तथा विषादी उपलब्ध भएन।
आखिर किन भयो त यस्तो मूल्यवृद्धी? किन आयो यस्तो चरम अभाव?
श्रीलंका पनि नेपाल जस्तै आयातमा निर्भर देश हो। आयातमा निर्भर देशले विदेशी मुद्राले नै आयात गर्ने हो, र जनताको दैनिक आवस्यकता पुरा गर्ने हो। श्रीलंकाको लागि विदेशी मुद्राको मुख्य श्रोत भनेको पर्यटन व्यवसाय नै हो। २०१९ मा श्रीलंकाले ४ बिलियन डलर पर्यटन मार्फत नै भित्राएको थियो। तर कोरोनाले गर्दा पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएपछी विदेशी मुद्राको संचितिमा व्यापक कमी आयो।
कोरोना आउनु अघि २०१९मा विदेशी मुद्राको संचिति ७.५ बिलियन डलर रहेकोमा हाल पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएपछी घटेर ३.१ बिलियन डलर पुगेको छ। यती रकमले जम्मा २ महिनाको आयात धान्न सकिने अवस्था छ। ३.१ बिलियन डलरको विदेशी मुद्रा संचिति पनि चिनसँग १.५ बिलियन डलरको करेन्सी स्वाप गरेर पुगेको हो। होइन भने देश नै कंगाल हुने अवस्थामा पुगेको छ।
अब नेपालमा नै फर्कौं।
श्रीलंकाले पर्यटन व्यवसायबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरेको भएपनि नेपालको लागि पर्यटन व्यवसायको भूमिका खासै उल्लेखनीय छैन। यही कारण पनि कोरोनाले अहिले सम्म नेपालको अर्थतन्त्रलाई खासै प्रभाव पारेको थिएन। यसको कारण हो नेपालको विदेशी मुद्राको प्रमुख श्रोत रेमिट्यान्स हुनु।
तर हालै रेमिट्यान्समा कमी आउने बितिक्कै सरकार आत्तियो। सरकार आत्तिएको देखेर हामीलाई त खुसी लाग्यो होला किनकी सरकारको कामकारवाही प्रति हामी खुसी छैनौं। अर्थतन्त्र जोगाउन सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्धले हाम्रो जनजीवनलाई अहिले सम्म खासै ठुलो प्रभाव परेको पनि छैन। तर यदी श्रीलंकाको जस्तै अवस्था आएमा के होला? बिचार गर्नुस् त!
हामी नेपालीले ३२ अर्ब भन्दा धेरैको त चामल आयात गरेर खाँदै छौं। तरकारी भारतबाटै आयात गरेर खाएका छौं। नुन तेल त आयात गर्ने वाध्यता नै छ। हाम्रो दैनिक जीवनमा हामीले प्रयोग गर्ने सबै जसो कुरा आयातमा निर्भर भएको अवस्थामा विदेशी मुद्राको संचितिमा कमी आएर आयात रोकियो भने के होला? मूल्यवृद्धिले आकाश छुन्छ। हाम्रो त गाँस समेत रोकिन्छ।
नेताहरूले त लुटेको पैसाले आफ्नो खर्च धानीहाल्छन्, तपाइँ हाम्रो नेपालमा रहेका परिवार र आफन्तको अवस्था के होला?
तपाईले २-४ पैसा जोगाउन हुण्डीबाट पैसा पठाउँदा देशको अर्थतन्त्र डुबेर त्यो पैसाले नेपालका परिवारले केही किन्न नै नसक्ने स्थिति आयो भने के औचित्य त्यो बचतको?
नेता, मंत्री वा राज्य व्यवस्थासँगको रिस फेर्ने अवशर ५-५ वर्षमा आउने निर्वाचनमा मिल्छ। निर्वाचनमा नै आफ्नो रिस फेरौं। रिस फेर्ने नाममा हुन्डीको प्रयोग नगरौं, यसले तपाइँ हाम्रो नेपालमा रहेका परिवारलाई नै ठुलो संकटमा पार्नेछ।
Banner image source: www.freepik.com
२०१५मा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी गरेको बेलामा नेपालमा पेत्रिलियम पदार्थको मूल्य चुलिएको थियो। उक्त समयमा नेपाली समाजले पेट्रिलियम पदार्थको प्रयोगबाट विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो। शहरी क्षेत्रका केही भान्साले इण्डक्सन चुलोलाई प्रवेश दिएपनि नेपाली Read more…